७५३ वटै पालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना हुँदै | माण्डवी एफएम
७५३ वटै पालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना हुँदै
प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण १६, बिहीबार १९:५१
काखमा नवजात शिशु छ, स्तनपान गराइरहनुपर्छ । सेवा लिन स्थानीय सरकार (गाउँपालिका–नगरपालिका तथा प्रदेश) जानुपरेको छ । नजिकको सरकारको भवनमा स्तनपान मैत्री संरचना छैनन् । यो समस्याको अब अन्त्य भएको छ । पालिका तथा प्रदेश कार्यालयले अनिवार्य आफ्ना भवनमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्य ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न ७५३ वटै पालिकासहित प्रदेश कार्यालयमा स्तनपान कक्ष स्थापना गर्न अनुरोध–परिपत्र गर्ने तयारी गर्दै छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिसरमा गत वर्ष आजकै दिन स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको थियो । सो कक्षमा दुईजना महिलासम्मले आफ्ना शिशुलाई स्तनपान गराई सुताउन सक्नेछन् । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका पोषण शाखाका प्रमुख केदार पराजुलीले स्तनपान सप्ताह २०७६ का अवसरमा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनलाई कार्यान्वय गर्न सबै पालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना गर्न मन्त्रालयले अनुरोध–परिपत्र गर्न लागेको जानकारी दिए ।
सो ऐनमा सरकारी संरचनामा अनिवार्य स्तनपान कक्ष व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालले समेत धमाधम स्तनपान कक्ष स्थापना गरिरहेका छन् । तर, अन्य मन्त्रालयलमा स्तनपान कक्ष स्थापना गरेका छैनन् । नयाँ बानेश्वरस्थित प्रतिनिधिसभा भवन तथा सिंहदरबारस्थित सचिवालयको भवनमा समेत स्तनपान कक्ष छैन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा बैठकका समयमा महिला सांसदका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था मिलाइको थियो । उसो त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा आन्तरिक विमानस्थलमा ‘स्तनपान कर्नर’ रहेका छन् । सबै यात्रुले देख्न सक्ने ठाउँमा सो कर्नर नरहेकाले धेरैले यो सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
पछिल्लो जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पूर्ण स्तनपान भन्नाले शिशुको जन्म भएपछि एक घन्टाभित्रदेखि पाँच वर्षसम्मको स्तनपानलाई जनाउँछ । अर्कोतर्फ शिशु जन्मेको एक घन्टाभित्र स्तनपान गराउनेको संख्या ५५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।
सर्वेक्षणले स्तनपान गराउनुअघि १० जनामध्ये तीनजना शिशुलाई घ्यू, मह, चिनी चटाउने गरेको देखाएको थियो । शल्यक्रिया गरेर जन्माइएका शिशुलाई भने आमाको दूधलाई प्रतिस्थापना गर्ने अन्य खुवाइने गरेको देखिएको छ । अर्कोतर्फ आमाको दूधलाई प्रतिस्थापना गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सो सम्बन्धी ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ जारी भएको थियो । तर, ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापना गर्ने वस्तु कति बिक्री–वितरण हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा नै स्तनपानको अवस्था दयनीय
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा र हेलन केलर इन्टरनेसनलले गरेको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अस्पतालमा नै स्तनपान अवस्था गतिलो छैन । अध्ययनअनुसार शिशु जन्मेको एक घन्टाभित्र स्तनपानको दर केवल ४१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तीन दिनपछि नै आमाले बट्टाको दूध शिशुलाई खुवाउन थालेको सो अध्ययनले देखाएको थियो ।
यसैगरी शिशु जन्मनेबित्तिकैै आमाको नांगो छातीमा टँसाएर राख्ने दर केवल नौ प्रतिशत छ । शिशु र आमाबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई बढाउन, शिशुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न यसले सहयोग गर्ने हेलन केलरका स्वास्थ्यविज्ञ डा. अतुल उपाध्याय बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्तनपान सबैभन्दा पुरानो र पहिलो खोप हो, जन्मेको एक घन्टाभित्र देखि ६ महिनासम्म स्तनपान मात्र, दुई वर्षदेखि स्तनपानका साथमा अन्य खानेकुरा खुवाउनाले आमा र शिशुको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।’
यस्ता छन् स्तनपानका फाइदा
स्तनपानले आमालाई गर्भनिरोधकका रूपमा काम गर्छ । शिशुलाई स्वास्थ्य वृद्धि विकास, सम्पूर्ण आहारा, पानीको स्रोत हो । आमाको दूधमा पाइने तत्वले शिशुलाई रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । शिशुलाई जन्मना साथ छातीमा टाँसेर राख्दा पाठेघर खुम्चिने प्रक्रियालाई उत्तेजित पार्छ । यसले सालनाल निक्लन र रक्तस्रावसमेत बन्द हुने र आमाको तनावसमेत कम हुने महाशाखाका अधिकृत मुकुन्दराज गौतम बताउँछन् । आमाको दूधमा रोगनाशक तत्व तथा लेक्टोफोर्मिन नामको पोषक तत्व हुन्छ, जसले शिशुहरूको शरीरमा फलाम तत्व दिन्छ । आमाको दूधबाट आएका साधारण जीवाणुले शिशुको शरीरमा उब्जने विभिन्न रोगसँग प्रतिरोध गरेर उनीहरूको रक्षा गर्दछन् ।
बाहिरी वातावरणबाट आमाको शरीरमा पुगेका रोगका जीवाणु, शरीरमा रहेको विशेष भागको सम्पर्कमा आउँछन् र शरीरले ती विशेष रोगका कीटाणुको विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तत्वहरू बनाउँछ । यो तत्व ‘थोरासिक डक्ट’ भनिने एक विशेष नलीबाट सीधै आमाको स्तनसम्म पुग्छ र दूधबाट बच्चाको पेटमा पुग्दछ । यसरी शिशु आमाको दूध नियमित रूपमा खाएर स्वस्थ रहन्छन् । ‘आमाबाबुको सक्षमता, स्तनपानको सफलता’ आधार भन्ने नाराका साथ यस वर्ष स्तनपान दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइँदै छ । सो अवसरका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख ड भीमसिंह तिंकरीले स्तनपानका महत्वबारे जानकारी दिएका थिए ।
सर्पको टोकाइबाट अधिकारीको मृत्यु
गौमुखीको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम समपन्न